Ny lalao EPIC dia mampiditra korontana, ny fizika avo lenta sy maotera fanimbana | Avy amin'ny Linux
Y manohy amin'ny vaovao misimisy momba ny GDC 2019 izahay (Game Developers Conference 2019) izay samy nanolotra ny zava-baovao farany nataony ireo mpandika teny samihafa ary nanolotra an'i Stadia i Google izay nanolotra zavatra betsaka horesahina. Azonao atao ny manamarina ny mandefasa momba izany eto amin'ny bilaogy.
Ity GDC 2019 ity dia fotoana iray hanasongadinana ny Lalao EPIC ary tsy lanilany foana aho satria ao anatiny Manambara ny fampidirana ny kinova 4.22 an'ny motera sary Unreal Engine aho (EU) ho an'ny famoronana lalao video ary hanasongadinana ny fanatsarana ny motera ara-batana sy ny fanimbana avo lenta. Izay hiaraka amin'ny kinova 4.23 manaraka.
Unreal Engine 4.22 dia azo jerena mialoha ary antenaina fa hahatratra ny kinova farany ao anatin'ny roa herinandro eo ho eo.
1 Zava-baovao lehibe hatolotr'i Unreal Engine 4.22
1.1 Misafotofoto ny motika fizika sy fandringanana amin'ny Lalao EPIC
Zava-baovao lehibe hatolotr'i Unreal Engine 4.22
Ny Unreal Engine 4.22 dia namboarina ho ny kinova UE4 haingana indrindra, miaraka amin'ny fihenan'ny fotoana fananganana sy ny fanatsarana ary ny fanavaozana ny zava-bita.
Ity kinova ity dia hanolotra endri-javatra tena ilaina toy ny fitiliana taratra (fitiliana taratra), ary koa ny famerenana amin'ny laoniny Live ++ vaovao izay hanompo amin'ny fandefasana fotoana tena izy, fiaraha-miasa amin'ny mpampiasa marobe ao amin'ny Unreal Editor, fanatsarana ny Niagara VFX, fanohanana ny streaming Microsoft HoloLens, sns.
Hevitra lehibe iray hafa izay Azontsika atao ny manasongadina amin'ity kinova vaovao an'ny Unreal Engine 4.22 ity dia ny fanombohana ny fanohanana ny sehatra lalao Google Stadia vaovao.
Misafotofoto ny motika fizika sy fandringanana amin'ny Lalao EPIC
Con Misafotofoto, motika fizika avo lenta sy maotera, Epic mampanantena teknolojia vaovao ny fandringanana izay mamela ny solontena amin'ny tena izy miaraka amin'ny ambaratonga sy ny zava-bita tena mandroso.
Epic milaza ny teknolojia misy azy io dia azo ampiasaina eo an-toerana mba "hahazoana sary kalitaon-tsarimihetsika amin'ny fotoana tena izy amin'ny sehatra misy ambaratongam-potika lehibe ary fanaraha-maso tsy manam-paharoa ny famoronana votoatin'ny artista. '
Ny demo ampiasaina hanehoana ny fahaizan'i Chaos dia mitranga eo amin'ny tontolon'ny Robo Recall.
Ny tonian'ny UE4 Nanararaotra ny GDC 2019 ihany koa izy hiresaka momba ny fanombohana ny programa Epic MegaGrant.
Como ampahany amin'ity programa ity, ny Epic Games dia nanolotra $ 100 tapitrisa hanampiana ireo mpamorona lalao, mpamorona haino aman-jery, mpianatra, mpampianatra, mpamolavola fitaovana ary matihanina hafa izay naka ny motera sary tsy tena izy.
Mivoatra na miasa mba hanatsarana ny fahafahan'ny loharano misokatra ho an'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo.
Misongadina i Epic MegaGrants izay mpandimby ny programa Unreal Dev Grants an'ny Epeal, izay nanome ny vola fanampiana farany tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.
Ankoatra ity fanambarana ity, Epic koa dia nanonona ny tolotra tolotra an-tserasera an-tserasera avy amin'ny Epic, izay heverina fa "hanamora sy hanafaingana ny fandefasana, ny fiasa ary ny fivoaran'ny lalao avo lenta ho an'ny mpamorona."
Serivisy an-tserasera Epic manome SDK izay miasa amin'ny motera lalao, fivarotana ary sehatra rehetra ary tokony hanampy ny mpandraharaha hanome traikefa ara-tsosialy mitambatra ho an'ny mpilalao azy ireo.
ihany koa Nanambara i Epic fa nitombo ka nahatratra 85,000,000 ireo mpilalao PC, miaraka amin'ny programa Support-A-Creator izay mihoatra ny mpamorona mihoatra ny 55,000 dia nanambara fa lalao am-polony eo ho eo no tonga tao amin'ilay magazay, miaraka amin'ny refy fampisehoana ny fivarotana.
Ary ambarako fa fiaraha-miasa amin'ny Humble Bundle ny famelana ireo mpamorona hivarotra anaram-boninahitra avy amin'ny fivarotana Epic Games ao amin'ny Humble Store, anisan'izany ireo fivarotana Epic irery.
Epic dia tsy hahazo fizaram-bola amin'ny fivarotana lalao novidina tamin'ny alàlan'ny Humble Store. Ny fiaraha-miasa dia hanomboka amin'ny lakile azo avotana ao amin'ny fivarotana Epic Games, ary tsy ho ela dia avelan'ny Epic hampifandray ny kaonty Epic sy Humble ho an'ny fividianana mivantana.
"Ny fahombiazantsika dia mifandray tsy misy ifandraisany amin'ny fahombiazan'ny mpandrindra, ary io filozofia io dia mitarika ny zavatra rehetra ataontsika", hoy i Tim Sweeney, mpanorina sy CEO an'ny vondrona tamin'io hetsika io.
"Ny tanjonay dia ny hanampy ireo mpamorona sy fitaovana hanomezana traikefa tsara kokoa ho an'ny mpilalao."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » EPIC Games dia mampahafantatra an'i Chaos ireo motera fizika avo lenta sy motera fanimbana azy